”Inter macallin wayn bay heshay, Milan-na si fiican bay isu dhistay” – Marcello Lippi oo u riyaaqay kooxaha Milanese-ka ah – Gool FM
”Inter macallin wayn bay heshay, Milan-na si fiican bay isu dhistay” – Marcello Lippi oo u riyaaqay kooxaha Milanese-ka ah
(Beijing) 18 Agoosto 2017 – Marcello Lippi ayaa sheegay in AC Milan “ay dhistay koox xooggan” xagaagan, halka Luciano Spalletti “uu yahay damaanadda ugu wanaagsan ee ay haysato Inter.”
Lippi ayaa mar sii horreeysey sheegay inuu shaki ka qabo milkiilayaasha cusub ee Milan, balse macallinka xulka Shiinaha ayaa haatan go’aankiisa beddeley kaddib markii ay Milan si xooggan u gashay suuq xagaaga.
“Sidee Shiinaha looga hadal hayaa Milan iyo Inter? Aad baa isha loogu hayay,” ayuu u sheegay Gazzetta dello Sport.
“Suning Group horay baa loo ogaa awooddooda dhaqaale. Waxaa shaki yar laga qabey milkiilayasha cusub ee Milan, balse Rossoneri si wanaagsan bay u shaqaynaysaa. Waxay dhisteen koox muhim ah, waxay ila tahay in Montella uu ciyaari doono 3 difaac iyo kubad qulqul wanaagsan.” ayuu raaciyay.
“Spalletti waa damaanadda ugu wanaagsan ee damaca Nerazzurri, waa macallin caaqil ah oo ka shaqaysiin kara laacibiinta Icardi iyo Perisic.” ayuu ku dooday isagoo sheegay in Juve iyo Napoli ay safka 1-aad yihiin, kaddibna Milan, Inter iyo Roma ay ku xigaan.”
EL: ACM VS SHK 6-0....AC Milan oo ku heestey kooxda Shkendija + Sawirro
Nikola Kalinic oo ay shahaado caafimaad la gashay si uu....